Ethiostar - Localization and Translation Services in Ethiopia & East Africa
Tajaajila oogummaa Turjumaana fi Biyyoomssuu Itiyoophiyaa keessaa
Battaala jechoota kan baajata fi guyyaa-xumuraa keessaani kan guutu argadha
Tajaajila turjumaana oogummaa olaana kan isiin amantanni dha
Filachuu keessan duratti profaayilii, oogommaa fi muuxannoo turjumaanoota argadha.
Kontiraata nuu qabachu keessan dura waliigaltee iccitummaa mallatteessa
Nuu wajjiin michoomuun tajaajila gatii gadi buusa nutti kenninuun gammadaa
Dandeetti adeemsa turjumaanicha hordofuu, proojektoota gurguddoof haaroomsa guyyuu ni argatuu
Kafaltiin keenya USD 0.05(Qarsh 2.25) kaase hanga USD 0.25 (Qarsh 11.30) ti dha.
Wabii qarshii deebisitti fi guyyaa dhumaa jala darbee fi akkaatan barreessitii sirri hin taaneef addabii mataa ofi qabna
Faayilaa keessan olfe’atti, turjumaani isiinf taasifame karaa toora intarneetti ta’usa baraa
Jaalatamoo mammilaa fi michuu kenyaa warra muraasa keessa
Tajaajila Turjumaana fi Biyyoomsuu baha Afrikaa fi Itiyoophiyaa
Tajaajila hiikkorra kan ka’e waliigaltee dhabu mudamtanni beekituu? Dhaabbata Turjumaana amanamaa, ogeessota hiikkoo kan offi keessa qabu ergaa keessan dogonggoran kan hin hiikkinne barbaada jirtu? Yeroo isiin jalaa dabaarsiinan dhifaamanni dadhabdanii? Hanqiina dubbisa mirkaneesuu dhabun aartannii? maallaqa mi’aan hojjachiisatanni turjumanichii jajalatenaan ulfina dhabuudhaan isinitti dhagahameera? Hanqina iddoo dhabii makiina/parkii isiin mudaterra ? Ulaagalee keessan hubachuu dhabinaan turjmaanoota ykn ejeensiiwwan koomatanii beektuu?
Waa’ee tajaajila Turjumaana fi Biyyoomsuu barbaadan hir’ina ykn yaaddoo baay’ee qabachuu dandeesuu. Koommiin keessan hundunuu nuu biratti ni haqoomsaamoo fi fudhatamoodha. Muxxannoo durrii fi teekinnolojii gaarii irraa furmaata arganeen gargaramne kommiiwwan mamila keenya hundumaa irraa of-eegannoon baraane dhufneera. Hawwiin keenya isiini wajjin firooma hojii yeroo dheeraaf turu fi walitti-dhufiinsa Adeemsa hiikaa keenya dabalate yaada bali’inaaf nuu qunnamaa.
Odeeffannoo dabalataf nuuf bilbila:
+251 94 409 4314
Gatti sababefata kan ta'e
Tokko tokko jechootatiin kan kafaltii ifaa taasisuu dha.
Qarqabaalee garagara dhuunfaadhaaf, mit-mootummaa naannoodhaaf, dhaabbata fi idil addunya dhaaf
Kaffaltti dabalataa fi hir'isuu hin qabu
Wabii wagga tokko 100%qarshii-deebuu
Maamila yeroo hunda nuu biratti beekkamoo ta'aniif kaffalttin liqii yerro-dheeraa ni jiraata
ApI walittiqabata fi Meeshalee mijaata keessatti ijaarama ya'uu hojii dandeetti -dhabeessa kan godhu kan baleessu
Meeshalee hiikaa kompitara gargaru(Meeshalee MHKG)
Mamila (dedeebi'eef)yeroo hunda nuu biratti beekkamoo ta'aniif kaffaltti liqii yerro-dheeraaf ni jiraata
Hiikitoota ragaa 50+ nanoowan gudgudo hundamtti kan hojetanni sadarkaa mija’a qabiyee isiin barbaadannin kan danda’amu,qabeentaan isa rakiina hin qabu.
Hiikitoota ragaa 50+ (nanoowan gudgudo hundamtti)/naannoolee gurguddoo hundumarratti kan hojjetanni sadarkaa mija'a qabiyee isiin barbaadannin kan danda'amu,qabeentaan isa rakiina hin qabu.
Qooqowwan Eesi'anota, Eertri'anota, Itiyoophiyaanota, Awuuroppaa baay'ee beekamoo ta'a 30+.
Qulqulliina yaada keessa kan hin galchiin ariitiin hojjetame jajalate.
Afaan baay'een torbe keessatti jecha 50k+ ni hiikkaamuu.
Hojjetoota qooqa hiikan,sirreessan , dogonggoraa ilaalan ,hoogansa projektii,diizaayinii graafiksii,hojjetootaa mamilaaf dhimman fi kanneen biroo hedduu kan off-keessatti qabate dha.
Hiikka qulqulluu fi itti fuffi'insa
ApI walittiqabata fi Meeshalee mijaata keessatti ijaarama ya’iinsa hojii dandeetti -dhabeessa kan godhu kan baleessuu fi itti fufensa fi qulqullina proojektti hundumarraatti dha.
ApI walitti qabata fi Meeshalee mijaata of keessatti ijaarama ya'iinsa hojii dandeetti -dhabeessa kan godhu kan baleessu
Meeshalee hiikaa kompitaara gargaru(Meeshalee MHKG) itti fuff'insa fi qulqulliina proojektti hundumarraatti kan qabu dha.
Meemooriin Turjumaana tokkoon tokkoo projeektii fi mammilaatti odeffamera.
Mammila keenyaaf akkaata qajeelfama fi misooma jibsoo/Giloosaronni gatti malee ni keennamu
Adeemsa oomisha irraatti hirmaachuuf dandeetti fi mamila argachuu
Itiyoostaar Tajaajiloota qulqullinna olaana, amanama fi Turjumaana oogummaan finfinnee, Itoophiyaa fi baha Afriikaa keessatti keennudha. Nuuti tajaajila biyyomssuu kennittoota dursi kennamu keessa isaan tokko dha. Bal’inni tajaajila Turjumaana keeynaa Qooqa Ingiliizi, Freenchii, Jeermaan, xaaliyaan porchuugu’iz, Spaanishi fi araaba irraa gara qooqota Itooophiyaatti yookiin achii-asi
Qaaman wali Argaa
Mirgikoppii @ 2022 Turjumaana Itiyoostaar. Mirgii hunduma eegamdhaa. Kan inni dizaayinni ta'e Abnej Solutions.
CV/Resume kee Ol-fa'ee